တရုတ်ရိုးရာဆေးထိုးအပ်နှင့်စက်ချုပ် 20Khz Ultrasonic ဂဟေဆော်စက် Thermoplastic ထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအစားထိုး | Qianrong
Thermoplastic ထည်များအတွက် 20Khz Ultrasonic ဂဟေဆော်စက်ရိုးရာအပ်နှင့် Thread အပ်ချုပ်အစားထိုး
ဂဟေဘီး၏အနံ ၂၂ မီလီမီတာ
ကိုက်ညီ Transducer 5020-4D PZT4
မီးစက်အရွယ်အစား 400 * 195 * 98mm
ultrasonic အပ်ချုပ်စက် core ကိုအများစု thermoplastic ပိတ်ထည်ချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သာမန်အပ်နှင့်ချည်များကိုချုပ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ultrasonic အပ်ချုပ်မှုသည်အပ်နှင့်ချည်၊ မြင့်မားသောအပ်ချုပ်နိုင်မှု၊ ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်မြန်ဆန်သောအပ်ချုပ်မှုမလိုအပ်ပါ။ နှင့် ultrasonic ချောမွေ့စွာချုပ်ချုပ် ultrasonic ဂဟေဆော်ခေါင်း၏လှုပ်ရှားမှု ဦး တည်ချက်အထည်များ၏လှုပ်ရှားမှု ဦး တည်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောပြproblemနာကိုလုံးဝဖြေရှင်းနိုင်သည်နှင့်ထပ်တူမဟုတ်သော၏ပြproblemနာကိုကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိသာမန်အပ်ချုပ်စက်ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။
၁။ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်း - ဂဟေဘီးနှင့်ဖိအားဘီးသည်လွန်စွာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောချုပ်ရိုးချုပ်စဉ်တွင်လုံးဝလည်ပတ်နေပြီးအမြန်နှုန်းနှင့်ထောင့်ခြားနားမှုမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်တိကျသည့်ကန့်လန့်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံပျက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ပူပြင်းသောအရည်ပျော်မှုကြောင့်အပ်ချည်ကိုသုံးစရာမလိုတော့ပါ။ ထုတ်ကုန်သည်ရေစိုခံ၊ ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးခေါက်ရန်လွယ်ကူသည်။
၂။ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်း - Ultrasonic ချောမွေ့စွာချုပ်ထားသောပစ္စည်းသည်ဆက်တိုက်ချုပ်ရန်အတွက်သင့်လျော်သည်သာမကဂဟေဆော်နေစဉ်အထည်များကိုပါဖြတ်တောက်နိုင်ပြီးအလိုအလျောက်အစွန်းအတန့်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
(၃) အပူဓါတ်ရောင်ခြည်မရှိပါ။ စွမ်းအင်သည် ultrasonic ချုပ်ချိန်အတွင်းဂဟေဆော်ရန်ပစ္စည်းအလွှာကိုထိုးဖောက်နိုင်ပြီးအပူဓါတ်ရောင်ခြည်မရှိပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်ချုပ်ကိုင်ထားစဉ်အတွင်းအပူ - အထိခိုက်မခံသောထုတ်ကုန်များ၏ထုပ်ပိုးမှုအတွက်အထူးအကျိုးရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့အပူကိုလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
4. Controllable welding seam: ဒီအထည်ကိုဂဟေဆော်သောဘီးနှင့်ဖိအားကြိတ်စက်များကဆွဲထုတ်ပြီးဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဖိအား roller ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်, ဂဟေဆော်ခြင်းအရွယ်အစားနှင့်ဖောင်းကြွပြောင်းလဲနိုင်သည်။
5. ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုများ - အပူနှင့်ပလပ်စတစ် (အပူပြီးနောက်ပျော့ပျောင်းသော) ပိတ်ထည်များ၊ အထူးတိပ်ခွေများနှင့်ရုပ်ရှင်အားလုံးကို ultrasonic ချောမွေ့စွာချုပ်စပ်သည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ဂဟေဆော်နိုင်သည်။ roller များသည်သက်တမ်းရှည်စေရန်ခိုင်ခံ့သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ရှေ့သို့ Thermoplastic ပစ္စည်းအတွက် 20Khz Ultrasonic ပလပ်စတစ်ဂဟေဆော်စက်
နောက်တစ်ခု: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း 35Khz 1000w Ultrasonic Sealing thermoplastic Cloth Equipment